सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्यो : तोलाको कति ? जान्नुहोस् – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्यो : तोलाको कति ? जान्नुहोस्
सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्यो : तोलाको कति ? जान्नुहोस्
काठमाडौं : सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार ७८ हजार पाँच सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्यमा आज १५ सयले घटेर ७७ हजारमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
केही दिन अघि निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउ निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। तोलामा ८२ हजार ७ सय पुगेर सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। त्यसपछि सुनको भाउ घटन थालेको छ।
६ महिनाअघि मात्रै विवाह गरेको केही समय नबित्दै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नवविवाहित युवती मृ’त भेटिएकी छिन् । विदुर नगरपालिका वडा नं. १ ढुंगे बजार २१ वर्षीय सञ्जु खातीले बुधवार राति त्रिशुलीमा हा’म फा’लेकी थिईन् । युवतीको मृ’त्यु भएपछि प्रहरीले सोही स्थानमा अचेत अवस्थामा फेला परेका उनका पतिलाई प’क्राउ गरेको छ । विदुर नगरपालिका ढुंगेबजारस्थित खोलासँगै जोडिएको एक चार तले घरको बरन्डाबाट त्रिशुलीमा हा’म फा’लेकी सञ्जुको नदीसँगको बगरमा ब’जारिएर मृ’त्यु भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
बगरमा मृ’त अवस्थामा फेला परेकी उनलाई जिल्ला अस्पताल त्रिशुली पु¥याइएको थियो तर चिकित्सकहरुले उनलाई मृ’त घोषित गरेका थिए । उनका पति २२ वर्षका मौसम खाती पनि बेहोस अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार बुधवार राति १० बजेतिर स्थानीयले घ’टनाबारे प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
सञ्जु र मौसमबीचको सम्बन्ध भने त्यति राम्रो नरहेको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुबीच विवाद भइरहने गरेको र बुधवारपनि दुई जनाबीच विवाद भएपछि घ’टना घ’टेको हुनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । मौसमले चुरोट खाएको निहुँमा आमासँग मनमुटाव हुँदा सञ्जुले आ’त्मह’त्या गरेको घरका अन्य सदस्यले बताएका छन् ।
सञ्जुका माइती पक्षले आफ्नो छोरीले दे’ह’त्याग गरेको नभई उनको ह’त्या भएको दावी गरेका छन् । सञ्जुका बाबुले पनि उनको ह’त्या नै भएको दाबि गरेका छन् । सञ्जुका बाबुका अनुसार ज्वाईं मौसमले श्रीमतीलाई आफ्नै बाबुसंग सल्केको भन्दै शंका गर्ने गरेको र छोरीलाई त्रिशुली नदिमा ध’केलेर ह’त्या गरेको दाबि गरेका छन् । घ’टना बारे बिस्तृतमा तलको भिडियोमा हेर्नुस् :
छोरी जन्मिए गाउँपालिकाले २० वर्षसम्म मासिक पैसा बैंकमा जम्मा गरिदिने
गाईलाई भीआर उपकरण, खेतबारी र चौरका दृश्य देखाएर दूध उत्पादन बढाउने !
सल्यानमा धुमधमा बिहे हुदै थियो एक्कासी पण्डित, बेहुलाबेहुली मण्डपबाटै समातिए
बाटो खन्दा फेला पर्‍यो धेरै वर्ष पुरानो यस्तो मूर्ति
विवाह नभई १५ वर्षकै उमेरमा सुन्तलीले जन्माइन् छोरी, झुपडीमा कष्टसंग हुर्काउँदै सन्तान (भिडियो हेर्नुस्)